फुटबल फेसबुकको भित्तोमा – Wagle Street Journal
Posted byDinesh Wagle	 जुन 26, 2010 फुटबल फेसबुकको भित्तोमा मा3टिप्पणीहरु
फुटबल इतिहासमा हरेक विश्वकप कोशेढुङ्गा हुन्छ । करोडौं दर्शक उच्चाल्ने प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरूले एकअर्कालाई छक्याउँदै गोल गरेको या पेनाल्टी नछिराएको दृश्य’bout मानिसहरूले वर्षौं कुरा गर्छन् । यसपालीको विश्वकपचाहिँ ती सबै कुराबाहेक भुभुजेलाबाट चिनिने हो कि फेसबुक/ट्विट्टरबाट, म निश्चित भइसकेको छैन । भुभुजेला बजाउने दर्शकले पूरै रंगशालालाई एउटा ठूलो घार बनाइदिएका छन्, मानौं ती रिसाएका मौरी हुन् । उनीहरूको त्यो भुनभुनाहटले संसारभरिका थुप्रै दर्शकलाई दिक्क पारेको छ भने कतिपयले ‘त्यो अफ्रिकी फुटबल उत्साहको परम्परा’ भन्दै समर्थन गरेका छन् । रंगशालामा भुभुजेला प्रतिबन्ध गर्न फिफालाई अनुरोध गर्दै प्रतियोगिताको तेस्रो दिन मैले ट्विटेपछि बेलायतको योर्कमा बसेर वातावरण तथा राजनीतिमा पीएचडी भर्खरै सिध्याएका ललितपुरका महेश पौड्याल (twitter.com/mpoudyal)ले ट्विटे- ‘ओहो, मलाई भुभुजेला खुब मनपर्छ । खेल हेर्दा पृष्ठभूमिमा त्यो रमाइलो भुनभुनाहट ।’
वेब २.० भनिने अन्तरक्रियात्मक इन्टरनेटको जमानामा भएको यो पहिलो विश्वकप हो । १९९० को दशकको अन्त्यतिर चित्रसहितको इन्टरनेट ब्राउजिङ आए पनि २००० सम्म काठमाडौंमा त्यो केही अफिस या साइबर क्याफेमै सीमित भयो । २००२ को विश्वकप’bout नेपालीहरूले इमेलमा आफ्ना भावना साटे । २००६ मा फेसबुक अमेरिकामै सीमित थियो- कलेजमा । ट्विट्टर सुरु भएकै थिएन । धेरैजसो नेपाली तन्नेरी माइस्पेस र हाइफाइभमा हुन्थ्ये, तर अहिलेजस्तो विश्वव्यापी चाप साससाहरूमा थिएन ।
बितेको एक वर्षमा फेसबुकमा नेपालीहरूको बाढी लागेको छ । प्रविधि’bout अलि जानकार कतिपय तन्नेरीहरू ‘ह्या, फेसबुक पुरानो’ भन्दै ट्विट्टरप्रति आकर्षित भएका छन् । त्यो विश्वव्यापी लहर हो, प्रविधिमा सहजै भिज्नेहरूले ट्विट्टर मनपराएका छन् । बुझेपछि ट्विट्टरमा नशै बस्छ, फेसबुकको भन्दा बढी । तर दुवै साइटका विशेषता र कमजोरी छन् ।
बढी पारदर्शी र व्यापक मानिससँग सहजै पहुँच हुन्छ, ट्विट्टरमार्फत । अरुन्धती रोयसँग कुरा गर्न मन लाग्यो ? ट्विटरमा सजिलो छ । खाता खोल्नुस्, बाकसमा @arundhati_roy लेखेर सन्देश टाइप गर्नुस्, उनले देख्छिन् । ट्विटको गहनाता हेरी प्रायः ख्यातिप्राप्तले जवाफ दिन्छन् । फेसबुकमा एड भनेजस्तो ट्विटरमा फलो (पछ्याउनु) भनिन्छ । ट्विटरमा कसैसँग कुरा गर्न उसलाई पछ्याउनै पर्दैन । पछ्याउँदा उसका ट्विट्सहरू स्वतः आफ्नो भँगालोमा ‘टाइमलाइन’मा आउँछन्, जसलाई फेसबुकमा ‘न्युज फिड’ भनिन्छ । या भँगालो । ट्विट्टर एउटा मञ्च हो, जहाँ गएर ‘खै के लेख्ने’ या ‘भात खाएँ’ लेखेर हुँदैन । मञ्चको वक्ताले उपयोगी कुरा गरे मान्छे सुनेर बस्दैनन् ? ट्विट्टरमा पनि उपयोगी सूचना, जानकारी र कुनै पनि घटना’bout तपाईंले मात्रै दिनसक्ने विचार/विवरण ट्विटे मान्छेहरूले पछ्याइहाल्छन् ।
Posted byDinesh Wagle जुन 26, 2010 Posted inनेपाली समाज,प्रबिधी,हेल्लो शुक्रबारट्यागहरु: इन्टरनेट,ट्वीट्टर,फुटबल,फेसबुक,विश्वकप,facebook,football,internet,twitter,world cup
जुन 26, 2010 मा 10:44 बिहान
nirjala pandey says:
जुन 23, 2011 मा 8:29 अपराह्न
पिंगब्याक: गुगल @ १३ | ब्लगमान्डू